တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် ဟိုဒင်းဖြစ်မည် (၂) ~ ဒီမိုဝေယံ
တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် ဟိုဒင်းဖြစ်မည် (၂)
ပြီးခဲ့တဲ့ တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် ဟိုဒင်းဖြစ်မည်.... ပိုစ့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရေးကြပြောကြ အသံတွေ ဆူဆူညံညံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။ အပြုသဘောနဲ့ပဲ ဝေဖန်ဝေဖန် အပျက်သဘောနဲ့ပဲ ဝေဖန်ဝေဖန်.. အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရ ဆိုဒ်ဘက်က လာရောက်ရေးသားသူများ ကိုတော့ ကျွန်တော့်တို့ Logic နည်းနဲ့ပဲ ပြန် တွေးကြည့်ကြရအောင်.. ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေသလို သူတို့လည်း သူတို့ အလုပ်သူတို့ လုပ်နေတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်...။ ကျွန်တော်တို့က ဒါအဖြူဆို သူတို့က ဒါကို အမဲလို့ မြင်အောင်လုပ်ရတာပါပဲ..။ အမှန်ဆိုလည်း အမှားဆိုပြီး လုပ်ရမှာ သူတို့ တာဝန်ပါ...။ တစ်ခုကွာတာကတော့ ကျွန်တော့် အမြင်ကို ချပြတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘယ်အစိုးရရဲ့ အထောက်အပံ့ကို ရယူလုပ်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ပဲ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ပြည်တွင်းက ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ မပြောနိုင် မဆိုနိုင် မတင်ပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မတရားမှုတွေကို ဖော်ထုတ် ရေးသားနေတာပါ...။ အဆိုပါ အဖြူကို အမဲလုပ်၊ အမှားကို အမှန်လိုက်လုပ်နေတဲ့ တစ်ချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ အစိုးရရဲ့ လစာငွေ၊ သို့တည်းမဟုတ် တနည်းနည်းနဲ့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ပြီး ဖြစ်စေ ပတ်သက်နေသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ နိုင်ငံရေး ဝက်ဆိုက်တွေ ဘလော့(ဂ်)တွေမှာ အမြင်ပြောင်းပြန် ဖြစ်အောင် ဝင်ရောက်ရေးသားပြီး သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်နေကြတယ်ပဲ မြင်ကြည့်လိုက်ကြပါ....။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြရအောင်ဗျာ....
ကွန်မာန့်တွေမှာ ယခင်ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Saction ကြောင့် အတိုက်အခံကြောင့် ဆိုပြီး ပြောဆိုတဲ့ အသံတွေ ကိုကြားရသလို တစ်ချို့ကလည်း ရန်ကုန်တွင်သာ မဟုတ်ပဲ ပဲခူး၊ မန္တလေးနဲ့ တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်း အခြေအနေတွေ ဆိုးနေတာကို ရေးသားဖို့ တောင်းဆိုလာပါတယ်...။ Sanction ကြောင့် အတိုက်အခံကြောင့်လို့ ပြောနေတဲ့ စကားတွေကို ပြောင်းပြန် ပြန်တွေးကြည့်ရင် တည်ဆဲ အစိုးရတွေဟာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လုံးလုံး တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်နေပါတယ် အောင်မြင်နေပါတယ် ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေခဲ့သလို ရှေ့စကား နောက်စကားမညီ တိုင်းပြည် မတိုးတက်တာ အတိုက်အခံတွေကြောင့် ဆိုတော့ အတိုက်အခံတွေက အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လုံးလုံး လုပ်သမျှအောင်မြင်နေပြီး တောက်လျှောက် တိုင်းပြည်ကို မတရားအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေက အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လုံးလုံး NLD နဲ့အတိုက်အခံတွေရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးမကျစွာနဲ့ ခံနေရတာလားလို့ တွေးထင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်...။ အတိုက်အခံတွေကပဲ အောင်မြင်နေတာလားလို့ ပြောင်းပြန် ပြန်စဉ်းစားမိတာပါ..။ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ...
ယခုပိုစ့်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရုရှားခရီးသွား ကြော်ငြာပါ မြန်မာပြည်ရဲ့ Sex Mission အကြောင်း ဆက်စပ်ပါရှိတဲ့ SeX Tourism ဆိုတဲ့ ရုရှားအင်တာနက် စာမျက်နှာပါ.. မြန်မာနိုင်ငံက လိင်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာ နေရာတွေကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ရုရှားလူမျိုးတွေရဲ့ ရေးသားချက်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...။
သိမ်ကြီးဈေး(င)ရုံ က Palace နဲ့ Emperor Night Club တွေပါ..။ ညဘက်မှာ အဆိုပါအောက်ထပ် မှောင်ရိပ်ကျတဲ့ နေရာမှာ လိုက်လံ ခေါ်ယူနေတဲ့ လိင်ပွဲစားတွေထဲမှာ နယ်မြေခံ ရဲနယ်ထိန်းတွေပါ ပါပါတယ်တဲ့.. အဆိုပါ လိင်ပွဲစား ရဲနယ်ထိန်းတွေ ပါမှပိုစိတ်ချရတယ် လို့ဆိုပါတယ်...။ ကဲအောက်မှာ ဆက်ကြည့်ရအောင်...
Well now about Myanmar. Nochnaya life there is seething at clubs in the market area Teyndzhi (it's in Yangon) Outside Shwedagon Pagoda Rd. in the "skyscraper" City Centre Plaza, there are two discos "Emperors Disco" (5 th floor) and "The Palace" (6 th floor)
far there is "Shanghai" and "69 Entertainment" but in these I have not been so I will not write.
In the first two spent5days Personally for me the best adventure across Southeast Asia.
MOREEEEE girls !!!!! All are young (18 to 23) I had not time to sit down as I like Aborigines Cook was surrounded by fairies (number 15) and where each was able to reach out and started stroking ulybatsya.S easily configure the two in my opinion the best and leave others asking udalitsya.Predlozhil treat -ordered water!! Prices: 10 bucks shot ,20-long. Offered forathree-exclusive asked dokinut5baksov.Voobschem pulled okueno !!!!!
But! There really is for prostitution caught and punished (at least for the fairies), therefore:
-Walk your fairy you will not go, even if your hotel is across the street.
Hotels are allowed to farang girls naperechet.derzhat them basically as always kitaytsy.oni on okrainah.kak I explained to the girl these hotels pay the police foralicense. Overnight price-10 bucks.
Scenario takov.Vybiraete девочку.Договариваетесь.Выходите seemingly together but not ryadom.Ona dogovarivaetsya with the taxi driver (they are underalot of the club, the price of 03.02 Dolar) saditsya.Vy her and the taxi starts as that pursuit edit loop and checking whether the police hvosta.Priezzhaete in the hotel, and pay for komnatu.Zaselyaetes vpered.Devochke pay utrom.Nu I'm still at the club gave3Dolar manager so he with me as his bag was busy with the writing, feel themselves Abramovich.
The first night did not listen to anyone, and dragged him into his fairy gest "Okinawa" as the receptionist sees me withafairy (1 night) fell to his knees, he wept bitterly and asked to dump more quickly with the girl otherwise it tomorrow posadyat.Nachal his ugovarivat.Itog: through 55 minutes of coaxing ulamal let me withagirl in the room for 15 minutes !!!!
(generally to have his night did not spoil) was short interesno.Tay, Cambodia, Vietnam and Lao otdyhayut.Devochki way mandatory program performed well for his age.
And if anyone needs the address motel license: Manawhari street, 28, Dagon Township, Yangon, ph: 538944, 227896:
ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ ၃၈လမ်းထောင့် Asia Plaza Hotelအောက် အောက်ထပ်က Asia Plaza Entertainment City နိုက်ကလပ်ပါ သိမ်ကြီးဈေး(စီ)ရုံက (ညဘက်မှ စည်ကားပေမယ့် ဒီနေရာကတော့ ၂၄နာရီပါတဲ့) ဒီဓာတ်ပုံတွေက ရုရှား Sex Tourism မှာ တင်ထား ရေးထားတဲ့ ပုံတွေစာတွေပါ...။
အပြည့်အစုံ ဆက်ဖတ်ချင်ပြီး အဆိုပါ Sex Tourism Myanmar ဆိုဒ်ကို ကြည့်ချင်ရင်... Click(ကြည့်နည်း အရင်ဦးဆုံး ရုရှားလို ပေါ်လာပါမယ်.. Google Toolbar တင်ထားရင် ဘယ်ဘက်အပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ Translate ကိုနှိပ်ကြည့်ရင် Englishလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..။
AlJazeera သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ သိမ်ကြီးဈေး (c)ရုံရှေ့ ညမြင်ကွင်းနှင့် Myanmar's HIV crisis
ပြည်တွင်းမှ ပရိသတ်အတွက် အယ်လ်ဂျာဇီးယာဖိုင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် http://www.mediafire.com/?114klhxualg5sr3
ကဲဒါကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ... အောက်မှာတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ ခေတ်ကာလ ပြည်တွင်း စတိတ်ရှိုးတစ်ခုရဲ့ မြင်ကွင်း တစ်ခုပါ...။ တိုင်းပြည်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ခေတ်ကာလကို သရော်ဝေဖန်တဲ့ သင်္ကြန်သံချပ်ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ်...။ ပိတ်ပင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ မဆလလက်ထက်မှာတောင် သင်္ကြန်အခါမှာ သံချပ်ထိုးပြီး လက်ရှိခေတ် အခြေအနေကို သရော်ပိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်...။ ယခုစစ်အာဏာရှင်တွေ လက်ထက်မှာတော့ သင်္ကြန်သံချပ်ဆိုတာ တီကို ဆားနဲ့ပက်ရင် တွန့်သလို ဝေလာဝေးပေါ့... ထို့အတူ သံယာတော် အရှင်မြတ်တွေရဲ့ တရားပွဲတွေကိုလည်း တင်းကြပ်စွာ ပိတ်ပင် စီစစ်ပြီးမှ ခွင့်ပြုနေပါတယ်... ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ပေးထားတာကတော့ အောက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း လတ်တလော.. ပြည်တွင်း စတိတ်ရှိုးတွေက မြင်တွေ့နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါပဲ...။ ကဲရှူစား ကြည့်ရှုတော် မူကြပါဦး..။ ဒါကိုလည်း Sanction ဆိုပြီး ဝေဖန်ဦးမလားပဲ..။ စက်ရုံတွေ ပိတ်လို့ အပြင်ကို ရောက်လာတဲ့ စက်ချုပ်သမတွေတော့ မဟုတ်တန်ရာပါဦး...။
မေလ (၂၁) ရက်နေ့က မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ “SOLO LIVE” ဖျော်ဖြေပွဲ
Myanmar Celebrity ရုပ်သံဖိုင်ပါ...
ပြည်တွင်းမှ ပရိသတ်များ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ “SOLO LIVE” ဖျော်ဖြေပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင်.. http://www.mediafire.com/?tucbxfxwhdxxr35
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် အတွင်း နိုင်ငံတော်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိတဲ့ ကဏ္ဍမကျန်ရအောင် ကြိုးပမ်းတည် ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် တို့အတွက် တိုင်းပြည်မှာ တခေတ်တခါမှ မရှိဘူးတဲ့ HIV, Sex Mission (Myanmar), Sex Tourism (Myanmar) စတဲ့တိုးတက်မှုတွေကို ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်...။
တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် ဟိုဒင်းဖြစ်မည်(၁) ပြန်ဖတ်ချင်ရင် Click